How to learn and read English faster | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တိုင်းပြည်အတွက်ဆို အသက်သေပါစေ … တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့လူရည်ချွန် ပြည်သူ့လူရည်ချွန်တွေ……
Surging of Ultra-Nationalism in Myanmar »
ကျွန်တော့်တို့ ပညာရေးစနစ်ဟာ factory English learning system ပါပဲ။text book ထဲမှ vocabulary များအားကျက်ခြင်း meaning ကျက်ခြင်းတို့ကို ကျွန်တော် တို့ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီး။သို့သော်…ကျွန်တော်တို့သည် ဒီလောက်များပြားလှသော words တွေကို တကယ့်အပြင် လက်တွေ့ဘ၀တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ထိုများပြားလှသော စကားလုံးမျာသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲတွင် လွယ်ကူစွာ ပျက်ပြယ်သွားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ဘာကြောင့် လွယ်ကူစွာ ပျက်ပြယ်သွားရသလဲ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေသည် text book English ထဲက individual words တွေရဲ့ meaning တွေကိုပဲ လေ့လာခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ native speaker တွေဟာ words တွေကို မှတ်မိခြင်းအားဖြင့် မလေ့လာကြပါ။သူတို့ဟာ phrases တွေကို လေ့လာကြပါတယ်။ what isaphrase? Phrases ဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း အလိုလို တွဲထားသော words အစုတွေပင် ဖြစ်ပါတယ်။phrases တွေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့်တခြားအကျိုးသက်ေ၇ာက်မှုကတော့ vocabulary နဲ့ grammar ကိုပါ လွယ်ကူစွာ သူ့အလိုလို လေ့လာသွားတာပါပဲ။ phrases လေ့လာတဲ့ သူသည် grammar လေ့လာတဲ့သူထက် အင်္ဂလိပ်စကားကို ပိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဒါမှမဟုတ် Newspaper တွင် ကျွန်တော်တို့ မသိသော word တစ်ခု တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း သူ့ဘေးတွင် ကပ်လျှက်ရှိသော စာလုံးများ ဒါမှမဟုတ်..sentence တစ်ခုလုံးကို မိမိ၏ note book ထဲတွင် မှတ်သားထားသင့်ပေသည်။ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရန် phrases များ စုဆောင်းရန်အတွက် note book သီးသန့် တစ်အုပ် ထားရှိသင့်ပေသည်။ကျွန်တော်တို့ အရင်လေ့လာတဲ့စနစ်က word တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ meaning ကိုပဲ လေ့လာခဲ့ကြတဲ့ စနစ်ပါ။ အခုလေ့လာတဲ့စနစ်က phrases ( groups of words ) တွေရဲ့ meaning ဒါမှမဟုတ် sentence တစ်ခုလုံးရဲ့ meaning ကို လေ့လာတဲ့စနစ်ပါပဲ။ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို second language အနေနဲ့ သင်ယူနေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ natural learning system ပါပဲ။အဓိက အချက်ကတော့ မှတ်သားထားသော phrases တွေကို အကြိမ်ကြိမ် review လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။
(၁) သင့်အတွက် အသစ်ဖြစ်သော phrases များကို မိမိ၏ note book တွင် မှတ်သားသော အကျင့်ကို ပြုလုပ်ပါ။( phrases နဲ့ clauses များကို ထွေထွေထူးထူး ခွဲခြားနေစရာမလိုပါ။ဥပမာ…the person on the mountain, The book on the bathroom floor, The sweet potatoes in the vegetable bin တို့သည် prepositional phrase ဖြစ်ပါတယ်။inarude manner,without care,in those days, in all places, in that place,once uponatime စသည်တို့ဟာ adverb phrases များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
the recent controversial illustrated leather bound American history book စသည်တို့ဟာ noun phrases များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ noun phrases ဟာ စာလုံးတော်တော် များများ ကို ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ I love baking cake မှာ baking caking ဟာ gerund phrase ဖြစ်ပါတယ်။I love to bake cake မှာ to bake cake ဟာ infinitive phrase ဖြစ်ပါတယ်။My cake finally baking in the oven , I was free to rest for 30 minutes.မှာ my cake finally baking in the oven ဟာ absolute phrase ဖြစ်ပါတယ်။ Phrases ၁၀ မျိုးရှိပါတယ်။ အထက်ပါ phrases များကို ဥပမာအနေနဲ့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင် မသိသေးသော အသစ်ဖြစ်သော အသုံးဝင်မယ်ထင်သော phrases များကို သင့်note book မှာ မှတ်သားရာတွင် ဒီ phrases က ဘာအမျိုးအစား ဟော့ဒီ phrases က ဘာအမျိုးအစား လိုက်မှတ်သားစရာမလိုအပ်ပါ။အဲ့လိုမှတ်သားခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ပိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အဲ့လို လိုက်ပြီး မှတ်သားနေဖို့ အချိန်လည်း မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်လုံးထက်ပိုသောword group များကို အစုလိုက် အစုလိုက် လိုက်မှတ်ရုံပါပဲ။
(၂) အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သော phrases များကို ကျွန်တော်တို့ က stories , newspaper,articles ,easy novels စသည်တို့ကနေ မှတ်သားရမှာပါ။ phrases တော်တော်များများနှင့် ရင်းနှီးနေပြီဆိုလျှင် နောက်တဆင့်အနေနဲ့ audio ကနေတဆင့် မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- BBC,CNN,Audio book,Movies, songs စသည့်တို့မှတဆင့် မိမိတို့ အတွက် အသုံးဝင်မည့် စကားလုံးအစုများကို မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ super easy English learning system ပါပဲ။ လပိုင်း အနည်းငယ်အတွင်း သင်အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲဆိုတာ ကို သင်ဂရုပြုမိမှာပါ။
အောက်ပါ link မှာ ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီး ဖြစ်သော အရိုးရှင်းဆုံးသော phrases ၁၀၀၀ ခန့် ကို ဥပမာ အနေနဲ့ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ pronunciation ပါ ပါဝင်သောကြောင့် လွယ်ကူစွာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် grammar လေ့လာခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ ရပ်တန့်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာ အံသြစရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့သူ အများအပြားကတော့ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မို့လဲ ဆိုတာကို နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အင်္ဂလိပ် grammar တော်တော်များများကို မူလတန်း အလယ်တန်း အထက်တန်း တက္ကသိုလ် နဲ့ အခုအချိန်ထိ ပါ နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲကြပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကို ကျွန်တော်တို့ မေးခွန်း ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကား ကို လွယ်ကူစွာ ပြောတတ်ပြီလား။အလိုအလျှောက်ပြောတတ်ပြီလား။ ကျွမ်းကျင်စွာပြောတတ်ပြီလား။အင်္ဂလိပ် grammar rules တွေ တော်တော်များများ လေ့လာခဲ့ကြသော ကျွန်တော်တို့ဟာ စကားပြောရာတွင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားများဟာ grammar ကော မှန်ရဲ့လား။ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုအချိန်အထိ နှေးဆဲ မှားဆဲပါ။Native speaker တွေဟာ အင်္ဂလိပ် grammar ကို မလေ့လာကြပါဘူး။နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မိခင်ဘာသာစကားပြောရာတွင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကားရဲ့ grammar ကို စဉ်းစားပြီး ပြောလေ့ရှိပါသလား။English grammar ကို လေ့လာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့သည် English language ကို study လုပ်နေခြင်းမဟုတ်။ English language ကို analyze လုပ်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာရေးသားရာတွင်တော့ grammar ဟာ အသုံးတည့်ချင် တည့်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်စာ ရေးသားရာတွင် ကျွန်တော်တို့မှာ ရေးသားမည့်အကြောင်းအရာကို စဉ်းစားနေဖို့ အချိန်ရှိပါတယ်။ မှားသွားရင်လည်း ပြန်ဖျက်ပြီး ပြန်လည် ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ စကားပြောရာတွင် ပြောမည့်အကြောင်းအရာကို စဉ်းစားနေဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ အချိန်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က တဖက်လူ စကားပြောတာကို မစဉ်းစားပဲနဲ့ ပြန်ပြောတတ်ချင်တာပါ။ ဥပမာ..တဖက်လူက မေးခွန်းတစ်ခု မေးပြီဆိုပါဆို့။ ကျွန်တော်တို့ က အဲ့မေးခွန်းကို active voice နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ရမလား။ passive voice နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်ရမလား။future tense သုံးလိုက်ရင် ကောင်းမလား။ဘယ် article ကို သုံးလိုက်ရမလဲ။ ဒီ preposition ကို ဒီလိုထည့်လိုက်ရမလား။adverb ပါ ထည့်လိုက်ရင် ကောင်းမလား။ ဒီ grammar rules တွေကို စဉ်းစားနေဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ အချိန်မရှိပါဘူး။အင်္ဂလိပ် grammar rules တွေကို တွေးပြီး ပြောခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speaking abilities ကို အလွန်းနှေးကွေးစေပါတယ်။အရေးအတွက် grammar ကို သီးခြားလေ့လာတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ grammar isakey. ဆိုတာ စာမေးပွဲအောင်ချင်ကြသော သူတွေအတွက် မှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရာတွင် central key လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ နားထောင်ခြင်းပါပဲ။ learn with your ears, not with your eyes.စကားကောင်းမွန်စွားပြောနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ လုံလောက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ listening practice ရှိရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြောမည့် natural speechတွေဟာ နားမှ တဆင့်လာသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်က ပြသနာ စတက်တော့တာပါပဲ။ပြီးခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖတ်ခြင်းနဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေသည် text book တွေ ဖတ်တယ်။ grammar rules တွေဖတ်တယ်။ စကားပြောတတ်ဖို့ English dialogue တွေဖတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ listening skills တော်တော်ကို နည်းခဲ့တာပါ။အခုအချိန်ကနေစပြီး ကျွန်တော်တို့ဟာစကားပြောတတ်ဖို့ listening skills ကို အတော် လေ့လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ English listening skills ကို ကလေးတစ်ယောက်လို သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ တစ်ခု ပြောချင်ပါတယ်။ US က baby တစ်ယောက်။ သူလည်း အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောတတ်ဖို့သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။သူကို အင်္ဂလိပ် text book ပြပြီး သင်ယူခိုင်းလို့ ရနိုင်ပါ့မလား။ grammar ထဲက rules တွေကို ပြပြီးတော့ကော။ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူဟာ စကားပြောတတ်ဖို့ ၆ လကနေ တစ်နှစ်အတွင်း နားထောင်ရပါလိမ့်မယ်။နားထောင်ပါ များပြီးသွားရင် သူဟာ word တွေကို တစ်လုံးချင်းစီ စတင်ပြောလာပါပြီ။ နောက်ပြီး groups of words ( phrases ) တွေကိုပါ ပြောတတ်လာမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုပြောတတ်လာနိုင်တာဟာ listening မှတဆင့်ပါ။
၁ နှစ်ကျော်ပြီး သွားရင် သူဟာ စကားလုံးအတော်များများကို သိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သိုသော် သူသည် စကားကို နည်းနည်ပါးပါးပဲ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ listening level is higher than speaking level ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ မှတ်သားထားရမည့်အချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့က ကလေးတွေလို လေ့လာရမှာပါ။ပထမဆုံး နားလည်လွယ်တဲ့ audio တွေကို နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ simple audio book, simple audio stories,dialogue audio စသည်တွေပါပဲ။easy listening isakey ပါ။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားထောင်ပါ များလေ listening skill တက်လေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ…ကျွန်တော်တို့ simple audio story တစ်ပုဒ်ကို ၁၀ ခေါက် အခေါက် ၂၀ လောက် နားထောင်ပြီးပြီဆိုပါစို့။ simple story လည်း ဖြစ် အခေါက်ပေါင်းများစွာလည်း နားထောင်ပြီးပြီ ဖြစ်သည်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ simple story ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် နားလည်နေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတွေဟာ vocabulary အသစ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရာနှုန်းပြည့်နားလည်ဖို့ ဒါဟာ ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။ storyတစ်ခုလုံး ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် နားလည်ပြီးပြီ ဖြစ်သော ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျန်ရှိတဲ့ မသိသေးသော vocabulary တွေကို ခန့်မှန်းလို့  ရနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ vocabulary တွေကို စုဆောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်နားလည်သော vocabulary များသည် dictionary ကိုကြည့်ပြီးမှ နားလည်သော vocabulary တွေထက် မှတ်မိလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ listening ကို focus လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ နေ့တိုင်း နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခေါက်ပေါင်းများစွားနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုနားထောင်ဖြစ်တဲ့သူက ပိုပြောနိုင်ပါတယ်။၁၀ လ ဒါမှမဟုတ် ၁ နှစ်လောက် ပုံမှန်နားထောင်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ခြင်း ပြီးပြီ ဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလိုအလျှောက်စကားပြောတတ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒီအချက်ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လေးနက်စွာလေ့လာခြင်းပါပဲ။ Deep learning isakey to automatic speaking ပါပဲ။Automatic speaking ဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားပဲ ပြောခြင်း..ဘာသာမပြန်ပဲ ပြောခြင်း…grammer rules တွေကို မစဉ်းစားပဲ ပြောခြင်း…စကားလုံးများလွယ်ကူစွာ ထွက်လာခြင်း တို့ပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပြောမည့်စကားလုံးများကို ထွေထွေထူးထူး ကြိုးစားစရာမလိုအပ်ပဲ ပြောခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့် လေးနက်စွာ လေ့လာမှုပြုပါ။ deep learning =speak easily ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနေဘ၀တွင် deep learning ဆိုတာကို သိပ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်တို့ ပညာရေး စနစ်ကြောင့်ပါပဲ။ ဥပမာ-ယနေ့ chapter 1 ဆိုပါစို့။ ဆရာက paragraph တွေ ကို ရှင်းပြတယ်။ ဒါက ဒီလို..ဟိုဟာက ဟိုလို။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ပြီး သေသေချာချာရှင်းပြပါတယ်။နောက်နေ့ အဲ့ဒီ chapter 1 နဲ့ပတ်သက်ပြီး exercise တွေလုပ်တယ်။ နောက်နေ့ grammer ဆရာက အဲ့ chapter 1 နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise တွေထပ်လုပ်တယ်။နောက်အပတ်ရောက်တော့ chapter2ကို ထပ်သွားတယ်……ဒီလိုပဲ ထပ်လုပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ စာမေးပွဲ ဖြေကြတယ်။ စာမေးပွဲအောင်တော့ နောက်တစ်တန်း ထပ်တက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်တန်းပြီး တစ်တန်း တက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြားကြရမှာပါ။၁၀တန်းသင်ရိုးကို ဘယ်ဆရာက ဘယ်နှစ်လပြတ်နဲ့ အပြတ်သင်တာ။ဆရာတွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့။အမြန်သင် ပြိုင်ကြတာ။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ပဲ အဲ့ဒီဒဏ်တွေ ခံကြရတော့တာပဲ။ ပြီတော့ တက္ကသိုလ် ရောက်တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျပြန်တော့လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပဲ …..ဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက် သင်ကြားခဲ့သော lesson များဟာ ရေးရေးပဲ မှတ်မိနေတော့ပါတယ်။ အပြင်လောကတွေ အဲ့ဒါတွေ ကို အသုံးပြုဖို့ အတော်ကို အလှမ်းဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘွဲရဖို့အတွက် ကျောင်းနေခဲ့ကြရတာပါ။ဒါက ကျွန်တော်တို့ ခေတ်အကြောင်းပါ။ အရင်ခေတ်ကတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ သမိုင်းဘာသာ ကို အင်္ဂလိပ်လို သင်တဲ့ခေတ်ပါ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ deep learning ဆိုတာနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့ကြရပါတယ်။လေးနက်စွာ လေ့လာမှုကို ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ …မိမိလေ့လာသော phrases ဒါမှ မဟုတ် audio story တွေကို repeating လုပ်ဖို့ပါပဲ။မှန်ကန်သော အပြင်လက်တွေ့ဘ၀တွင် အမှန်တတကယ် အသုံးတည့်သော material တွေကိုသာ repeating လုပ်ဖို့ပါပဲ။ Reapting ကို ဘယ်လောက် လုပ်ရမလဲ..ဆိုတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။အထပ်ထပ် လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။သင်ပြောသော နေ့စဉ်စကားများထဲတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်လာတဲ့အထိ လုပ်ရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသော လူအများကြားထဲ စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိ repeating လုပ်ထားသော စကားလုံးများ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်လာတဲ့အထိ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည့်မှု ထားရှိပါ။ အမှားများ ပြုလုပ်ရန်ကြောက်စရာမလိုသင့်ပေ။လူတွေကသာ သင်အမှားပြုလုပ်သည်ကို အမှန်အဖြစ် ပြုပြင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။ သင်မှတ်သားမည့် pharases ဒါမှ မဟုတ် simple story တစ်ခုခုကို repeating သုံးလေးခေါက်လောက် လုပ်ပြီး ငါ့တိုးတက်မှု တော်တော်မြန်ဆန်နေပါလား။ငါတော်တော်ဟုတ်နေပါလားဟု မယူဆသင့်ပေ။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ထဲတွင် စွဲမြဲလာတဲ့အထိ လုပ်ရမှာပါ။IT’S CALLED DEEP LEARNING.ငါ reapting ဒီလောက်လုပ်တာတောင် ပြန်ပြန်ပြီး မေ့နေပါလား တိုးတက်မှုမရှိပါလား တစ်ခုခုများ မှားနေပြီးလားဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်မကျသင့်ပါ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ NOTHING IS WRONG ပါ။ ဘာကြောင့်မို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ English language ကို second language အနေနဲ့ လေ့လာနေကြလို့ပါပဲ။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ယုံကြည်မှုပါပဲ။ကျွန်တ်ာတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို အတော်လေး လွမ်းမိုးပါတယ်။လူတွေဟာ အောင်မြင်တဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရင် အောင်မြင်လေ့ရှိကြပြီး..ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေရင်တော့ ကျရှုံးတတ်ကြပါတယ်။အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုစိတ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ learning ability ကို လွှမ်းမိုးတာပါပဲ။သင်အချိန်တိုတိုနဲ့ အောင်မြင်ချင်ရင် positive beliefs ထားရှိရပါလိမ့်မယ်။
Teachers force us to memorize grammar rules and take tests. We learn to believe that there is only one right answer for every question. We learn to fear mistakes. In school, We are embarrassed to make mistakes– and thus We fear speaking.
ဒီလို negative belief တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အရွယ်ရောက်လာတာပါ။ဒီ negative belief တွေက ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါပဲ။အင်္ဂလိပ်စကားကို လွယ်လွယ်ပြောတတ်ဖို့ ဒီ negative belief တွေကို ဖျက်ဆီးရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာ These beliefs are wrong! လို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အော်ပြောရမှာပါ။ဒီ negative belief တွေကို positive belief တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့အတွက် “English speaking is easy!”, “Iʼmagreat English speaker!”, and “Perfection equals death!” လို့ မနက်တိုင်း မနက်တိုင်း အော်ပြောသင့်ပေသည်။ယခုလို small action လေးက သင့်ကို နောက်ဆုံးမှာ positive belief ရှိသူအဖြစ် လုံးဝပြောင်းလဲပေးစေပါတယ်။
နောက်ထပ်ယုံကြည်မှုတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ သင့်ရဲ့ လေ့လာမှုကို လုံးဝပြောင်းလဲစေမှာပါ။ အဲ့တာကိုတော့ CANI လို့ခေါ်ပါတယ်။ CANI = CONSTANT AND NEVER-ENDING IMPROVEMENT ( အမြဲတမ်းနဲ့ အဆုံးမရှိသော တိုးတက်မှု ). CANI means that you will speak English very easily by focusing on small improvements every day. Thatʼs right– SMALL improvements. With CANI, Our goal is to makeavery tiny improvement each day.
TQ…When our English teacher Mr. Maurice Allan Williams (brother in law of Surgeon U Than Aung) told us to think in Burmese and try to speak those words and sentences in English BUT to think in English…we do not understand what he meant…Funny for us “To think in English”…Now only I understand what he meant. It is easier to think in English before speaking English.
Dear Ko Nyo Win…TQ. When I learn Malay language I learnt the sentences and phrases, so it is easy and faster to learn how to speak Malay. Any I just learnt about 100 sentences and pharases in Cantonese and few words just to talk with my patients. More than 90% of Chinese do not know that I do not really speak Chinese. Once started, as they already knew some Malay and English…just continue to mix three language…OK …Allow me to share in my blog.
Tags: Adpositional phrase, English language, Grammar, Language, Noun phrase, Phrase, Social Sciences, Style guide
This entry was posted on July 4, 2013 at 9:46 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.